Afaka manatratra olona 1 lavitrisa amin’ny Filazantsara isika amin’ny May 2020 raha miaraka!
Ny Andro Maneran-tany ho an’ny Fitoriana ny Filazantsara dia vina avy amin’Andriamanitra. Zaraiko izany vina izany mba ho voatorin’ny Filazantsara avokoa ny firenena rehetra
Ny Filazantsara no hafatra lehibe indrindra nambara hatrizay ary nantsoina isika mba hizara izany, hanala ny Kristiana amin’ny fahanginany! Alaivo sary an-tsaina ny mety ho fiantraikan’ny GO 2020 (Volan’ny Fitoriana Filazantsara Maneran-tany) raha vavolombelona avokoa ny mpino rehetra
Ny Go 2020 (Volan’ny Fitoriana Filazantsara Maneran-tany) dia fahafahana ho an’ny mpino manerana izao tontolo izao mba ho eny ivelany ary hijoro vavolombelona ny amin’i Jesosy Kristy. Miantso ny olon-drehetra aho, mba handehanantsika any ivelany ary hanambara sy hizara ny vaovao mahafalin’ny famonjena.